प्रधानमन्त्री भन्छन्, 'गैंडाज आर गैंडाज, नट राइनोज' | Kendrabindu Nepal Online News
प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘गैंडाज आर गैंडाज, नट राइनोज’
२ भाद्र २०७६, सोमबार १२:४२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैंडालाई ‘राइनो’ नभन्न सबैमा आग्रह गरेका छन् । गैंडालाई अंग्रेजीमा ‘राइनो’ भनिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गैंडा नै भन्न सबैमा आग्रह गरेका हुन् ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका हवाई नियामक निकायका महानिर्देशकहरुको सम्मेलनलाई सोमबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गैंडालाई गैंडा नै भन्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘गैंडाज आर गैंडाज, नट राइनोज ।’ सम्मेलनमा सहभागी करिब चार सय विदेशी पाहुना अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथालाई माउन्ट एभरेष्ट नभन्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘सगरमाथालाई ‘माउन्ट एभरेष्ट’ भन्नुको साटो सगरमाथा नै उच्चारण गरिदिनुहोस् ।’
सोमबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा ४३ देशका ४ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गैंडालाई गैंडानै भन्न आग्रह गर्दै आएका थिए । राइनोज भन्नुभन्दा गैंडा भन्दा नेपाली शब्द नै प्रसिद्ध हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै यसबारे कुरा उठाउँदैं आएका छन् ।
gaida, kp sharma oli, गैंडा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
Prevट्राफिकको आँखा छलेर भाग्दै हुनुहुन्छ ? सावधान !
‘आकाश यात्रा’ लोकार्पणNext